शेयर मार्केटमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहाेस सुरूवात - DURBAR TIMES
HomeEconomyशेयर मार्केटमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहाेस सुरूवात
नेपालमा पछिल्लाे समय शेयर मार्केटमा आकर्षित लगानीकर्ताहरूकाे संख्या बृद्धि भइरहेकाे छ । थाेरै लगानीबाट राम्राे प्रतिफल प्राप्त हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन स्वभाविक हाे ।
अधिकांश व्यक्तिहरू शेयर मार्केटमा प्रवेश गरेपनि अझै कतिपय मानिसहरू यसकाे विषयवस्तु थाहा नभएर अरूकाे कुरा सुनेर मात्र बसिरहेका छन् ।
शेयर मार्केटकाे कुरा थाहा भएकाे तर प्रकृया थाहा नभएर लगानी गर्न नपाएकाहरूका लागि याे लेखमार्फत केही जानकारी प्रदान गर्नेछाैँ । आउनुहाेस लेखलाई सुरु गराैँ
शेयर मार्केटकाे दुईवटा बजारमध्ये प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरुकाे आकर्षण बढ्दाे छ । आज हामी पनि यही प्राथमिक बजारकाे बारेमा जानकारी दिनेछाैँ ।
के हाे त प्राथमिक बजार अर्थात आइपिओ ?
सर्वसाधारण जनतासँग लगानी उठाएर कम्पनी चलाउनका लागि गरिने आह्वानपत्र नै साधारण अर्थमा शेयर मार्केटकाे प्राथमिक बजार हाे । यहाँ सर्वसाधारण जनताले विभिन्न बैंकमार्फत लगानी गर्छन् र दाेश्राे बजारमा आफ्नाे लगानीकाे शेयर बेच्ने गर्छन् ।
कसरी लगानी गर्न सकिन्छ प्राथमिक बजार (आइपिओ) मा ?
यसका लागि सर्वप्रथम तपाइँसँग बैंक अकाउन्ट हुनुपर्छ । यदि तपाइँकाे नागरिकता छैनभने तपाइँकाे अभिभावककाे संरक्षकत्वमा बैंक अकाउन्ट खाेल्न सक्नुहुन्छ ।
बैंक अकाउन्ट खाेलिसकेपछि अब शेयरका लागि डिम्याट अकाउन्ट खाेल्नुपर्छ । जुन सम्बन्धित बैंकबाटै अथवा बैंककाे क्यापिटलमा गएर खाेल्न सकिन्छ । डिम्याट अकाउन्टसँगै अनलाइनबाट शेयर भर्न सजिलाे हाेस भन्नका लागि मेराे शेयर अकाउन्ट पनि खाेल्नुपर्छ । जसले गर्दा शेयर भर्ने बेलामा बैंकमा लाइन बस्न पर्दैन ।
मेराे शेयरकाे अकाउन्ट खाेलिसकेपछि त्यसकाे ७२ घण्टाभित्रमा तपाइँकाे इमेलमा आएकाे इमेललाइ खाेली पासवर्ड रिसेट गर्नुपर्छ र नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्छ । त्यसपछि बैंकमा सम्पर्क गरि मेराे शेयरका लागि सिआरएन नम्बर रजिस्टर गर्न लगाउनुपर्छ र उक्त नम्बर आफूले पनि लिएर आउनुपर्छ।
त्यसपश्चात प्राथमिक शेयर आइपिओ खुलेकाे सूचना प्राप्त भएपछि मेराे शेयरमार्फत आइपिओ भर्न सकिन्छ ।
कसरी भर्ने आइपिओ ?
सर्वप्रथम मेराे शेयर लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल मेराे शेयरकाे माेबाइल एप्लिकेशन पनि लञ्च भैसकेकाे छ । जसमार्फत लग इन गरिसकेपछि तीनवटा धर्का भएकाे ठाउँमा क्लिक गरी माइ आस्बामा क्लिक गर्ने ।
त्यसपछि एप्लाइ फर इस्युमा क्लिक गर्ने
त्यहाँ आइपिओ काे लेखेकाे कम्पनीकाे नाममा क्लिक गर्ने र त्यहाँ भनेअनुसार सबै विवरण भर्ने ।
अन्त्यमा सिआरएन नम्बर डायल गरी एप्लाइ गर्ने । एप्लिकेशन एप्लाइ सक्सेसफुल भनेपछि तपाइँकाे आइपिओ भरियाे भनेर बुझ्ने ।
Previous articleच्याम्पियन्स लिग :रियल मड्रिडको संघर्षपूर्ण जित
Next articleअञ्जु पन्तले गरिन दाेश्राे विवाह